Lily pad jasper na-akpọkarị lily pad lidi rụrụ arụ - Video
Zụta ekeresị osisi jasper na ụlọ ahịa anyị
Lily pad jasper na-akpọkarị lily pad liri obsidian. O di nfe ichoputa site n’inyocha ihe mmuo ha nke oma, inyocha okpukpo ha, ihe isi ike ha, ma obu ikike ha.
Lily pad jasper, nchịkọta nke microgranular quartz ma ọ bụ chalcedony na usoro ndị ọzọ ịnweta mmiri, bụ ihe ndozi, adịghị ọcha nke silica, nke na-achakarị ọbara ọbara, odo, agba aja aja ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba, na -acha anụnụ anụnụ. Colorcha acha ọbara ọbara na-achakarị maka nsonye ígwè. Jasper na-eji mma dị larịị were ya mee ihe ma ọ bụ jiri ya chọọ mma. Enwere ike ịmịchaa ya nke ukwuu ma jiri ya mee ihe maka ite, akpa anụ, na igbe mkpọchi. Ike Jasper ahụ doro anya bụ 2.5 na 2.9.
Jasper bụ nkume nwere agba agba nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụcha agba ọ bụla sitere na ihe ndị dị na mịnịstrị mbụ ahụ ma ọ bụ ntụ. Ternzọ ihe dị iche iche na - ebilite n'oge usoro nchịkọta na - akpụpụta usoro na usoro nkwụnye ego na ntụ ntụ silica mbụ ma ọ bụ ntụ ọkụ ọkụ. A na-echekarị ka ikuku hydrathermal dị ka ọmụmụ jasper.
Enwere ike gbanwee Jasper site na mgbasa nke mineral yana nkwụsị na-enye ọdịdị nke uto ahịhịa, ya bụ, dendritic. A na-agbajikwa ihe mbụ ahụ ma ọ bụ na-agbagọ, mgbe etinyechara ya, na usoro dị iche iche, nke ndị mejupụtara ya na mineral ndị ọzọ mechara. Ingbọchị ihu igwe, ka oge na-aga, ga -eme ka agba na-enweghị atụ dị egwu.
Ndị na-ese ihe e sere ese na-egosi ụdị njiri, dị ka bandeeji na-asọpụta ma ọ bụ na-echekwa mmiri site na mmiri ma ọ bụ ikuku, ihe dendritic ma ọ bụ ụcha ụcha, na-ebute ihe na-egosi ihe ngosi ma ọ bụ onyonyo, n'akụkụ akụkụ. Ọdịiche nke site na etiti na-emepụta ọpụrụiche pụrụ iche, agụ owuru anụ ahụ, ma ọ bụ agbụ agbụ sitere na mgbaji dịka a hụrụ na leisegang jasper. Nkume ahụ gwọrọ, nke warawara adọwa na-ewepụta jasper gbajiri agbaji.
Lily pad jasper pụtara
Nkume a na-eche oke na-eweta udo n’oge nsogbu, na-enye nguzozi ebe na-akwalite obi ike na mkpebi siri ike, na-ewepụ ihe na enyemaka iji wepụta ihe riri ahụ na uche.
Leopard anụ ahụ jasper
Tags Jasper, agụ owuru, Anwụ anụ ahụ
Jasper na-acha uhie uhie
Tags Jasper, red